China 8000mm Ogologo ID200mm Od204mm Carbon eriri tube rụpụta na ụlọ ọrụ | Yan Tuo
Ngosi nkọwapụta ngwaahịa
Ebumnuche kachasị nke eriri carbon bụ iji mejupụta resin, metal, ceramics na carbon dị ka ihe na-agba ume iji mepụta ihe mejupụtara ngwa ngwa. Carbon fiber mesikwuru epoxy resin composites nwere ike kachasị elu na usoro dị mkpa n'etiti ihe ndị injinịa dị. Carbon fiber akwa okpomọkụ na-eguzogide na-ebute ụzọ n'etiti eriri kemịkal niile.
Carbon fiber tubes nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe, a pụkwara ime ya ka ọ bụrụ ogwe osisi ọkpụkpụ, akụ akụ, usoro nhazi usoro, usoro ịkụ azụ, ogwe aka robotic, nnyefe nnyefe, wdg.
Anyị ga-enye nkwado ọrụ aka ọkachamara na usoro ahụ dum, gụnyere nlezianya maka ojiji, nsogbu nchekwa, ntinye na iji ntuziaka. Ma buru ibu maka nsogbu nke ngwaahịa n'onwe ya.
Nke gara aga: carbon eriri telescopic osisi maka window ihicha osisi
Osote: Carbon eriri tube maka mma